Olee otú ndabere Photos si iPod
> Resource> iPod> Olee otú ndabere Photos si iPod
The atụmatụ bụ ka mmekọrịta foto jidesie m iPod aka na idetuo ha jidesie ọrụ m na kọmputa. M nwere iTunes na nke a na kọmputa, ma ike ịchọta ụzọ na-foto jidesie ọrụ m na kọmputa.
Ọ bụrụ na ị rụnyere iTunes na kọmputa gị, ị nwere ike mfe mmekọrịta foto gị iPod. Ma ọ bụ nnọọ siri ike ka ndabere foto site na iPod gị na kọmputa, n'ihi na iTunes ọ dịghị ka ị na-eme. N'ezie, mezue ọrụ, otu mfe ma adaba ụzọ bụ iji a smart iPod na kọmputa transfer - Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-enye gị ka ị na nkwado ndabere na mpaghara iPod igwefoto mpịakọta, foto Ọbá akwụkwọ na ndị ọzọ albums gị na kọmputa na ala.
Olee otú ndabere foto site na iPod
Ndị na-esonụ akụkụ tumadi akọwa otú ndabere foto gị iPod gị na kọmputa na-agba ọsọ Windows os. Download a iPod na kọmputa transfer na kọmputa gị. Mgbe ahụ, na-aga site akụkụ n'okpuru.
Cheta na: The Windows version bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod aka 5/4/3 na-agba ọsọ iOS 6 / iOS 5 / iOS 7 / iOS 8 / iOS 9, iPod nano 7/6/5/4/3/2/1, iPod kpochapụwo 3/2/1 na iPod ịkpọgharịa / 4/3/2/1. Ezie na Wondershare TunesGo (Mac) nanị na-akwado iPod aka 5/4-agba ọsọ na iOS 5, iOS 7, iOS 8, ​​iOS 9 ma ọ bụ iOS 6.
Nzọụkwụ 1. Mee gị iPod mgbe na-agba ọsọ a usoro
Ka malitere, wụnye a iPod ka PC transfer na kọmputa gị. Na-agba ọsọ ya. Jiri eriri USB jikọọ gị iPod na gị PC. Nke a iPod ka PC transfer ga ngwa ngwa ịchọpụta gị iPod. Mgbe ahụ, faịlụ gị iPod, dị ka music, photos, a ga-emere na ekpe kọlụm.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-ahụ iTunes echichi window na PC gị na mgbe na-agba ọsọ Wondershare TunesGo, ị kwesịrị ị na-eso echichi window iji wụnye iTunes na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. ndabere iPod photos
Na ekpe kọlụm, pịa "Photos" taabụ iji bugote foto management window. All albums na gị iPod ga-emere na nri panel. Họrọ gị chọrọ albums na pịa "Export ka". Ọ bụrụ na ị na-ekpebi ndabere ụfọdụ photos, i nwere ike imeghe album na họrọ gị chọrọ photos wee pịa "Export ka".
Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, ị chọrọ ka a na ọnọdụ gị PC ịzọpụta exported foto ma ọ bụ albums.
Ọfọn, nke ahụ bụ nkuzi banyere akwado foto site na iPod aka. Ugbu a, enwe photos na kọmputa gị.
E wezụga akwado foto site na iPod, ị pụrụ ime ihe na nke a iPod ka PC transfer:
Nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPod gị PC: Nke a na usoro-ahapụ gị nyefee music faịlụ site na gị iPod aka, iPod nano, iPod ịkpọgharịa na iPod kpochapụwo gị na kọmputa.
Nyefee na tọghata videos ka iPod: Nke a na usoro-enyere gị aka nyefee na tọghata ọkacha mmasị gị videos gị iPod maka ụtọ n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
Ihichapụ Photos si iPad Mfe
Nbudata Photos si iPhone ka PC
Iṅomi Videos si iPad ka PC
Otú nyefee Music si iPod ịkpọgharịa ka iTunes
Wepụ Music si iPod ka Computer / iTunes Library
Otú nyefee Music si iPod ka Computer
Otú nyefee Music si gam akporo ka iPod
Olee otú undelete Notes on iPod aka 4/5
Olee otú Naghachi Photos si iPod Touch
iPod aka Iweghachite: Olee naghachi iPod Lost Movies
Olee otú Hichapụ Photos si iPod aka ozugbo